चन्द्र ढकाललाई पत्र, 'दादागिरी नै देखाउन खोजेको भए, खुलेआम आउनुहोस्, नत्र 'पाल्तु'हरुको 'थुतुनो' ठाउँमा राख्नुस्
ARCHIVE, BLOG, COVER STORY, POWER NEWS » चन्द्र ढकाललाई पत्र, 'दादागिरी नै देखाउन खोजेको भए, खुलेआम आउनुहोस्, नत्र 'पाल्तु'हरुको 'थुतुनो' ठाउँमा राख्नुस्
आदरणीय, चन्द्र ढकालज्यू
तपाईंलाई फोन गरें, उठाउनुभएन । मेसेज पठाएँ, रिप्लाई आएन । आओस् पनि कसरी ? तपाईं आफु नबोल्ने र आफ्ना कर्मचारी प्रयोग गरेर हामीलाई धम्क्याउन लागि पर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं । 'अति' गर्नु तर 'अत्याचार' नगर्नू भन्छन् । हामीले चाहिं अत्याचार नै भयो भन्ने लागेर तपाईंलाई पत्र लेख्ने साहस गर्दैछौं । केहि समय दिएर पढ़नुहुनेछ भन्ने आस गरेका छौं ।
तर यहि बीचमा तपाईंको दादागिरी अलि बढी नै भयो है ! तपाईंको एक कर्मचारीले आफ्नो सरोकारनै नभएको विषयलाई लिएर हामीलाई थर्काएको कुरा थाहा नै होला । थाहा नभए यो लिंकमा गएर पढ्नुहोस् ।
तपाईंलाइ धेरै व्यापारीले राम्रो भन्दाभन्दै पनि तपाईं फटाहाहरुको सङ्गतले त्यस्तै बन्दैहुनुहुन्छ भन्ने बोध छ कि छैन थाहा छैन । तर देशको एक मुख्य शक्तिले तपाईंलाई राष्ट्रिय भ्रष्टचारी घोषणा गरेको थाहा नै होला । थाहा नभए यो लिंकमा गएर पढ्नुहोस् ।
सुरुमा दु:ख गरेर बजारमा आएपनि तपाईंको कम्पनीले पछि समय जनतालाई ठगेको ठग्यै छ भन्ने कुरा पनि तपाईंलाइ थाहा नै होला । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले जनतालाई ठग्दा तपाईंले 'ठग'को उपमा पाउनुभएको छ भन्ने कुरा पनि थाहा नै होला । थाहा नभए एक पटक यो लिंकमा गएर आफ्ना कम्पनीले गरेको एक एक कर्तुतहरु समय मिलाएर पढ्नुहोस् ।
देशमा कानुन छ । तर तपाईंको नाम जोडेपछी देशमा कानुन मान्नु पर्दो रहेनछ सायद । तपाईंकै आडमा तपाईंको भाइ हेमराज ढकालले आइएमइ जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका नाममा गरेको गैरकानुनी कुकर्म थाहा छ कि छैन ? थाहा छैन भने यो लिंकमा गएर पढ्नुहोस् ।
हामी त तपाईंलाइ 'फटाहा' र 'ठग' व्यापारीको संगतमा लागेको भएर हिजोआज अलि अलि बढी नै जनतालाई ठग्न पल्किएको भएपनि दुख पाएको राम्रो व्यापारीको रुपमा चिन्ने गर्थ्यौं । हिजो आज माफियाहरुको जुठो अलि बढी नै खान थाल्नुभएछ क्यार ! मिडियालाई थर्काउने, धम्क्याउने काम गर्न थाल्नुभएछ । हामीलाई थाहा छ, तपाईंको आदेश विना तपाईंका कर्मचारीले हामीलाई दुर्व्यवहार गरेका छैनन्, गर्दैनन् । तीनको त्यति आँट पनि छैन । यदी दादागिरी नै देखाउन खोज्नुभएको हो भने आउनुहोस् खुलेआम बहस गरौँ । खुलेआम शक्ति प्रदर्शन गरौँ । होइन भने सधैंको ल्यांग ल्यांग किन हो ढकालज्यू ?
काम विशेषले आइएमइको अफिसमा जाँदा हाम्रा कर्मचारी चेलीले तपाईंका कर्मचारीको गुण्डागर्दी किन सहनु पर्ने ? आफ्नो हिसावमा काम गरिरहेका हामीले किन राती राती तपाईंका चम्चाहरुको धम्की खानु पर्ने ? किन आफ्नो सरोकार नै नभएको विषयलाई ठुलो बनाएर तपाईंका कर्मचारीको थर्काई खानु पर्ने ?
अव बहस तपाईंका ती 'पाल्तु'हरुसँग हुँदैन ढकाल सर । आउनुहोस् बहस गरौँ । दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर लड्ने हो भने लडौं । तर अस्तित्व रक्षाका लागि त आगो बन्नु परेपनि पछी परिदैन । देशमा सुचनाको हक छ । पत्रकारले पाएको अधिकार छ । त्यसमा कुनै पनि खालको सम्झौता हुन्न । 'दादागिरी नै देखाउन खोजेको भए, खुलेआम आउनुहोस्, नत्र 'पाल्तुहरु'को 'थुतुनो' ठाउँमा राख्नुस् !'
स्पष्टीकरण: 'थुतुनो' भनेको मुख हो है !